2012 Honda XR 650L – Used 2012 XR 650 L at Motorcyclist Magazine | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (33503)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10731)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9793)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9248)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (8894)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8463)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7661)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7136)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (6981)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6838)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6444)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6052)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5498)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5358)
တော်ဝင် Enfield ဂန္ထဝင်အကြားနှိုင်းယှဉ် 350 Cl vs ... (4925)
နေအိမ် → ဟွန်ဒါ → 2012 Honda XR 650L – Used 2012 XR 650 L at Motorcyclist Magazine
24 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 Honda XR 650L – Used 2012 XR 650 L at Motorcyclist Magazine
အဆိုပါ 2012 Honda XR650L isasleek and powerful dual sports bike that deliversasmooth and reliable ride in just about any setting. This multi-purpose bike is fully capable of handling the demands of the off-road routes as well as the paved roads with ease. The heart of this dual-sports machine is found in the 644cc, air-cooled, single-cylinder engine giving instant power when the throttle is pushed.
The traditional Showa 43mm suspension has air-adjustable cartridge forks that contain 16-position compression damping to ensure an optimal riding experience. The rear suspension isasingle shock Pro-Link Showa with 20-position rebound damping adjustability. အဆိုပါ 2012 Honda XR650L offersaride that is not easy to forget.
The Honda XR650L was first introduced in 1992 and over the years this model has become one of the most trusted and loved models on the market. မှစ. 1992 the bike has and has undergone several updates to ensure that the Honda XR650L is using the latest in cutting edge technology as well as to keep up to date with the changing styles over the years.
Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး AN 650 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype စက်ဘီး Kawasaki ER-6n တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Brammo Enertia ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati Diavel သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စမတ် eScooter အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Bajaj Discover Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati 60 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက်